Home » အသားပေး » သင့်ရဲ့သိုလှောင်၏ထိန်းချုပ်ရေးကိုယူ
ဂျိမ်း McKenna, VP စျေးကွက် & Pre-အရောင်းအင်ဂျင်နီယာအသုံးပြုပုံ Facilis
ရံဖန်ရံခါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချို့သောနည်းလမ်းမှာမိမိတို့စိတ်ကိုထားရှိပါတယ်သူတစ်ဦးအလားအလာဖောက်သည်ရ။ ဤသည်ကအခြားအဆောက်အဦးများ, မိမိအကျင့်တို့ကိုသတ်မှတ်သူဟောင်း-ကျောင်းမှဆရာ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအရှိဆုံးအလွယ်တကူမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်သောအရာကိုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခက်ခဲတဲ့င်နှင့်အများကြီးပိုလွယ်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်များနှင့်အတူအတွက်ကိုက်ညီမယ့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်။ ငါမည်သူမဆိုသူတို့ကိုယျတိုငျတှေ့မွငျရကြပြီမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုနည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝဗဟုသုတဖြစ်နိုင်သည်ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ သို့သော်စက်ရုံကွန်ရက်များရာပေါင်းများစွာအပေါ်တိုင်ပင်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု Workflows နှငျ့ရငျးနှီးအဆင့်တွင်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းတော်မူပြီးမှ, ကျနော်တို့စျေးသည်သူတို့ကိုအနည်းဆုံးခုခံ၏လမ်းကြောင်းကိုချဆင်ကန်းတောတိုးသွားကြဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦး disservice ပြုကြသကဲ့သို့ခံစားရသည်။
တစ်ဦးကသိုလှောင်မှုကွန်ယက်ကိုစိတျထဲတှငျအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဖြစ်လုပျဆောငျသငျ့သောသိုး၏နွားအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်အမြင်များကိုအဆုံးသတ်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ကု သ. မရသောအရာလုပ်ငန်းအိုင်တီသိမ်းဆည်းခြင်း, မတူဘဲဖန်တီးမှုမောင်းနှင်အဆောက်အဦအဖြစ်အလွယ်တကူအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးတို့ကကြိုးကိုင်နိုင်အဖြေတစ်ခုလိုအပ် ။ ဒီအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်; ဖန်တီးမှုအဆောက်အဦများတွင်အိုင်တီ၏ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ခံမှုလျှော့ချသူတို့အားအဆောက်အဝင်ငွေထုတ်လုပ်သောစနစ်များနှင့်လူတွေအပေါ်မှာပိုပြီးသုံးဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးဖန်တီးမှုစက်ရုံအတွက်သိုလှောင်မှုစနစ်ကပိုပြီးအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးစာရွက်စာတမ်းများဒေသအလိုက် cached နေကြသည်အနည်းငယ်သာဖိအား repository ကို၏မြန်နှုန်းအပေါ်ထားရှိသည်အဘယ်မှာရှိရုံးခန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။
စံကွန်ရက်ပူးတွဲသိုလှောင်မှုအားလုံး desktop ပေါ်မှာစက်အပေါ်ပုံမှန်အားဖြင့် installed ရဲ့တူညီတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးချရန်မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာထည်ကြှနျုပျဒေသခံကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မတည်ရှိပါဘူးတဲ့ဖိုင်ဤစာရွက်စာတမ်းရေးသားခြင်းခံရဖို့ခွင့်ပြုသောခေတ်မီစက်ရုံသို့ interwoven, တွင်ကျယ်စွာကွန်ယက်ကိုဝေစုပါပဲ။ ဒါဟာဌာနများနှင့်အချိန်ဇုန်ကိုဖြတ်ပြီးဆက်သွယ်မှုပေးပါသည်။ သင်တစ်ဦးတုန့်ပြန်ဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်ဆိုပါကညာဘက်ကို IP address ကိုနှင့်အတူသငျသညျ, ဘာမှရယူနိုငျပါသညျ။
အဆိုတော်များသို့သော်မြင့်မားသောယာဉ်အသွားအလာအဆင့်ဆင့်မှာအနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် throughput နှင့်အတူမြန်ဆန်နှင့်မြင့်မားရရှိနိုင်ဖြစ်ပြင်ဆင်ရန်-In-ရာအရပျကွန်ရက်များပေါ်တွင်မှီခိုဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးနေ့ထိမှန်သည်မဟုတ်, ထိုစက်ရုံပေးဆောင်ရမထားဘူး။ ထိုကြောင့်တစ်ဦးဖန်တီးမှုစက်ရုံအတွက်အနုပညာရှင်တွေ ပို. attuned သိုလှောင်စနစ်၏အပြုအမူမှဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အမှုအရာညာဘက်မဟုတ်သည့်အခါမကြာခဏနည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှခေါ်ဆိုမှုအောင်သူများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့လုပ်ငန်းသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်ဖန်တီးမှုစက်ရုံများအတွက်သာမန်အားဖြင့်မသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူလျှင်, ငါတို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလည်းယင်း၏ပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ရုံး server မှတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်သည်သင်၏အပြောင်းအလဲများကိုကယ်ဖို့မတတ်နိုင်သေးပါလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်အမည်ပြောင်းနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာကကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဒါကတစ်ရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပေမယ့်စီမံကိန်းကတစ်ဦးဖန်တီးမှုစက်ရုံအတွက်ဖိုင်တွေနှင့်အတူဤလုပ်နေတာစိတ်ကူးမယ်လို့ - ဗွီဒီယိုတန်ဖိုးရှိ gigabytes နှင့် terabytes နှင့်အတူ, audio နှင့်စီမံကိန်း metadata ကိုအမည်ပြောင်းနှင့်ကျပန်းတဝိုက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုချက်တဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာပေးရန်ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ကာလုပ်ငန်းအသွားအလာအတားအဆီးဖြစ်လာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ လုပ်ငန်းကွန်ရက်များကသင်၏ရုံးကွန်ယက်ကိုအဖြစ်ခွင့်ပြုချက်၏တူညီသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ။ authentication, ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အဖွဲ့ကိုမူဝါဒများသငျသညျမလိုအပ်ဖိုင်ကိုသည်သင်ရရှိနိုင်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်ကပ်အပ်နှံစီမံကိန်းကိုတာဝန်ကျတဲ့နေရာပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်မြင့်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားကြောင်း, အကြောင်းအရာ-ဖန်ဆင်းခြင်းသိုလှောင်မှုကွန်ရက်များနှင့်နိမ့်ဆုံးမှဖိုင်ကို-Level စနစ်ကခွင့်ပြုချက်စောင့်ရှောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းအသွားအလာအတားအဆီးကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဤစီမံကိန်း-based အသံအတိုးအကျယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဟုခေါ်သည်, ထိုသို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုတစ်ခုအိမ်ငှားဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်များအနေဖြင့်ကြီးမားသော unscripted ရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာစက်ရုံများမှ, လက်မှာအလုပ်အကိုင်အများအတွက်လိုအပ်သောဒေတာများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ်အခြေခံပြီးအသံအတိုးအကျယ်တာဝန်ကျတဲ့သိုလှောင်မှုခွဲဝေများ၏လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနဲ့အကျိုးရှိစွာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အသံအတိုးအကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိုလှောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုမြန်ဆန်လွယ်ကူသောဖန်ဆင်းခြင်း, အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုနှင့်ယာယီနေရာချထားဘို့ခွင့်ပြုသည့်အခါကစနစ်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်-built ခဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။
အများဆုံးစျေးကွက်-ဆက်ကပ်အပ်နှံထုတ်ကုန်ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးအလှည့်-key ကို, content တွေကိုဖန်တီးမှု-အာရုံစူးစိုက်သိုလှောင်မှုကွန်ယက်စျေးနှုန်းချိုသာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများမျိုးစုံရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယ်သူမျှမထူးခြားတဲ့-add တန်ဖိုးကိုရှိသည်ကြောင့်ကုန်စည်ဒိုင်နည်းပညာအမြဲနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသူတို့က, အစိတ်အပိုင်းများကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါ command line ကို interface ကိုတဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်ကြောင်း purported အလှည့်-key ကို shared သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ကြပါတယ်။ ထိုအစနစ်များ၏ထုတ်လုပ်သူသူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုလုပ်စီမံရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုအရာကြော်ငြာအဖြစ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးအခါဖောက်သည်အပြစ်တင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်မလုပ်သူကလူများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်, ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့စနစ်၏အချက်သည်မဟုတ်လော
ဒါဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားစနစ်များကိုအင်ဂျင်နီယာကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာရှိသမျှတို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသိရှိခြင်း, နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားဘာမှလုပ်နေတာရှောင်ရှားရန်ဆန္ဒရှိနေယူဆသင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့သိုလှောင်မှုကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုမှန်သည်။ သူကတောင်တစ်လှည့်-key ကိုကုန်ပစ္စည်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ချဉ်းကပ်စေခြင်းငှါ, ထိုအခါမူကားမိမိကွန်ယက်ကိုဖွင့်, သငျအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်အခါတိုင်းသငျသညျသူ့ကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ , ပုံစံလုပ်ရန်ပြောင်းလဲ, သင်၏ပြောင်းလဲနေသောပမာဏမှ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ရဲ့အဖြေတစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သင့်ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပါ။ သင့်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုပေါ်, သင်ကအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ထင်မည်သို့သင့်ရဲ့အသိပညာနှင့်အတူကစီမံခန့်ခွဲရန်။ ရုံးအလုပျသမားမြားအတှကျရုံးကွန်ရက်များ Leave, သင်၏အနုပညာရှင်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတူတက်စောင့်မမည်ကြောင်းသိုလှောင်မှုကိုဝယ်ကြလော့။
As Facilis'' အကြီးအကဲထုတ်ကုန်ဧဝံဂေလိဆရာဂျိမ်းစ်McKennaစက်ရုံမန်နေဂျာများကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ကိုကူညီအကြံဉာဏ်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူလမ်းညွှန်မှုပေးပါသည်။ သူနဲ့စတင် Facilis 2004 အတွက်နှင့်စျေးကွက်မှမူရင်း TerraBlock ထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကွှလာမီ Facilisသူ Workgroups မှာအဘို့အ PostWorks နယူးယော့နှင့်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာမှာအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော နည်းပညာ။ မိမိအဖန်တီးမှုခြမ်းနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းခုနှစ်တွင်ဂျိမ်းစ်လည်းဘော်စတွန်နှင့် New York မှာအမျိုးမျိုးသောရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာ, ထုတ်လွှင့်အထူးနှုန်းများနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တခုတခုအပေါ်မှာအယ်ဒီတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-14
ယခင်: စက်မှု R & D / ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်
နောက်တစ်ခု: DPA ရဲ့ 25th နှစ်မြောက်ပိုမိုနီးကပ်စွာ World Tour က၎င်း၏ဒုတိယခြေထောက်စတင်သည်နှင့်ဥရောပသို့တိုးတက်လာလိုက်ပါ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "သင့်ရဲ့သိုလှောင်၏ထိန်းချုပ်ရေးကိုယူ" ။ http://www.broadcastbeat.com/take-control-of-your-storage/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။